Uchwepheshe we-Semalt Uqala ngokuvikeleka kwe-Gmail - Amathiphu a-Anti-Scam
Njengoba abasebenzisi beqaphela kakhulu izindlela ezisebenzisekayo ukuhlaziya ulwazi, laba baduni baqhubeka bezitholela ngezindlela zabo. Indlela entsha kakhulu yokuthola i-traction yiyona ehlose umsebenzisi we-Gmail kusuka kuwo wonke umhlaba. Ochwepheshe bezokuphepha baxwayisa ukuthi kungaba nomthelela omkhulu kubantu abasebenzisa i-Gmail.
Ukusebenzisa izixhumanisi ezisemthethweni ze-Gmail, laba bahlambalazi bakhangela abasebenzisi abangaziwa ekuchofozeni izixhumanisi ezibaqondisa kumawebhusayithi lapho bangabamba khona ulwazi lwabo.
U-Ivan Konovalov, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , inikeza izindlela ezithile abasebenzisi abanganciphisa ngayo ingozi yokuwa nesisulu kulesi sikhalazo sokuphanga. Okulandelayo uhlu lwezinto ofuna ukuzazi.
I-Wordfence ithola isikhalazo se-Gmail sokuphanga. Kwenye yezingxenye zayo zebhulogi, ifaka ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuthi lezi zikhwama zisebenza kanjani. Abakwa-Scammers bahlose ama-akhawunti we-Gmail abasebenzisi abanayo ne-Google futhi abathumele ama-imeyili amaningi kakhulu. Basebenzisa amasu ahlukene ukuzama nokuphoqa umsebenzisi ekunikezeni ulwazi lwabo. Phakathi kwezindlela ezivame ukusetshenziswa kakhulu ukufakwa kwesixhumanisi, okunamathiselwe, noma ukuzifihla njengomxhumana noma inkampani ejwayele umsebenzisi.
Uma uqhafaza, isixhumanisi siqondisa umsebenzisi ekhasini elinesifana nesayithi langempela le-Gmail futhi licela umsebenzisi ukuba afake imininingwane yokungena ngemvume isikhathi esisodwa ukuze athole ukufinyelela. Yiziphi abasebenzisi abangazi ukuthi leli khasi elisha liyi-portal labaduni lapho bevuna amaphasiwedi namakheli e-imeyili. Lezi zizobanika ukufinyelela okugcwele ku-akhawunti yomsebenzisi bese zikhiphe ngaphandle. Ngokulawula okuphelele kwe-akhawunti, bayathumela i-malware ngokusebenzisa ama-imeyili abo kubathintana abayitholayo kule akhawunti. Ochwepheshe bezokuphepha banxusa abasebenzisi be-intanethi ukuthi bangalokothi basebenzise ukungena kanye namaphasiwedi afanayo kumasayithi amaningi njengoba bengasebenzisa amandla okuhlukumeza ukufinyelela amanye amasayithi umuntu okwamanje ilungu.
I-Google iyaqinisekisa ukuthi le nkinga ihambisana nokucubungula lolu daba. Njengamanje, inkampani ibuka izindlela ezintsha ezingaqinisa ngazo ukuzivikela kwabo ngokumelene nezigebengu ze-cyber ezisebenzisa amaqhinga anjalo.
Enkulumweni nomunye wabakhulumeli be-Google, banikeze uhlu lwezindlela abasiza ngazo ukugcina ukuvikeleka komsebenzisi ekuhlaselweni kwephishing ku-Express.co.uk. Phakathi kwabo kwakuyizixwayiso eziphephile zokuphequlula, ukutholakala komshini wokufunda komshini, ukuvimbela ukungena kwe-akhawunti okusolisayo nokuningi okuningi. Konke lokhu kuzama ukugwema ukungena okungagunyaziwe noma ukuthola imilayezo esivele ihlatshwe umkhosi njenge-scam scam. Kukhona inqubo yokuqinisekisa izinyathelo ezimbili abasebenzisi abangasebenzisa ukuthuthukisa isimo sabo sokuvikela.
Uma umuntu ekholelwa ukuthi kukhona ama-imeyili angama-phishing ebhokisini labo lokungenayo, kunezindlela abangayenza ukuze banciphise ukuhlehliswa kwedatha. Ekhasini lokungena ngemvume lesibili elivela ngemva kokuchofoza isixhumanisi, uma sibonisa isizinda sewebhu esihluke kulokho okusemthethweni kubonakala, khona-ke akungabazeki ukuthi ugaxekile. Isizathu siwukuthi abaduni basebenzisa "i-data URI" efaka ikheli elivumelekile kwi-fake domain. Noma kunjalo, ngaphakathi-phakathi kukhona izindawo ezimhlophe lapho befihla isixhumanisi sabo esinonya. Indlela kuphela abasebenzisi abangahlala bephephile ukuqinisekisa ukuthi akukho lutho olufika phambi kwegama lomphathi ngaphandle kokuthi "https: //."